Home page – Multiple Layout | University of Veterinary Science, Yezin
မွေးမြူရေးဆိုင်ရာဆေးတက္ကသိုလ်၊ ဆရာ၊ ဆရာမ၊ ဝန်ထမ်းမိသားစုများ၏ အဋ္ဌမအကြိမ်မြောက် စုပေါင်း ရဟန်းခံ ရှင်ပြု အလှူ တော် မင်္ဂလာအခမ်းအနားကို (၁၉.၄.၂၀၁၆) ရက်... Read more
Maung et al 2020_Effects of different vegetable protein sources and lighting programs on the perfor-mance of broilers Read more
မွေးမြူရေးဆိုင်ရာဆေးတက္ကသိုလ်၏ ၁၃-၈ ၂၀၁၈ ရက်နေ့တွင်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သော တက္ကသိုလ် ပညာရေးအဖွဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက် (၆/၂၀၁၈) ဆုံးဖြတ်ချက် ၆(င) အရ မှ သတ်မှတ်ကျေ... Read more
မွေးမြူရေး၊ ရေလုပ်ငန်းနှင့် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန၊ မွေးမြူရေးဆိုင်ရာဆေးတက္ကသိုလ် ၊2015-2016 ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများအတွက... Read more
နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ၊ ရေဆင်း၊ မွေးမြူရေးဆိုင်ရာဆေးတက္ကသိုလ် အတွက် ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် အောက်ဖော်ပြပါ ပစ္စည်းများကို မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူရန်... Read more
မွေးမြူရေးဆိုင်ရာ ဆေးတက္ကသိုလ်ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူ (၂၀ဝ) ဆံ့ အခန်း (၅၆)ခန်းပါ RCC (၂) ထပ် အိပ်ဆောင် (၃)လုံး ဆောက်လုပ်ရန် နှင့် ဆက်စပ်လုပ်ငန်းများအတွက်... Read more
De Heus Co.Ltd ရှိ Pig GP Farm တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် Technician (Junior) ရာထူး(၁၀)နေရာ အတွက် B.A.Sc ဘွဲ့ရများလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ လျှောက်ထားသူများသည... Read more
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ မွေးမြူရေးဆိုင်ရာဆေးတက္ကသိုလ် (ရေဆင်း၊ နေပြည်တော်)တွင် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ်အတွက် အောက်ဖော်ပြပါ တိရ... Read more
မွေးမြူရေးဆိုင်ရာဆေးတက္ကသိုလ် ရုံးသုံးပစ္စည်း၊ ပရိဘောဂပစ္စည်း၊ ထရန်စဖော်မာနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ဝယ်ယူခြင်း နှင့် e-Student Management System Softwar... Read more
(၂၉)ကြိမ်မြောက် စုပေါင်း မဟာဘုံကထိန်အောင်ပွဲ ရေစက်ချ အလှူတော်မင်္ဂလာ အခမ်းအနားကို (၂၇.၁.၂၀၁၉) ရက်၊ တနင်္ဂနွေနေ့ နံနက်တွင် ပြုလုပ်ကျင်းပခဲ့ပြီး ပင့်သံဃ... Read more
Download Download Download Download Download Download Download Download Download Download Download Download Download Download Download Download Downlo... Read more
၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ မတ်လ/ ဧပြီလအတွင်း ကျင်းပခဲ့သည့် ဒုတိယနှစ် (DVM)၊ ဒုတိယနှစ် (BASc)၊ တတိယနှစ်(DVM)၊ တတိယနှစ်(BASc)၊ စတုတ္ထနှစ်(DVM) နှင့် ပဉ္စမနှစ်(DVM) ဘွ... Read more
De Heus Co.Ltd မှ Technician (Junior) ရာထူး အလုပ်ခေါ်ယူခြင်းအတွက် လူတွေ့ အောင်စာရင်း ထုတ်ပြန်ကြေငြာခြင်း။ Read more
စိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီး ဒေါက်တာအောင်သူ မွေးမြူရေးဆိုင်ရာဆေးတက္ကသိုလ် နှင့် Massey University တို့... Read more
မွေးမြူရေးဆိုင်ရာဆေးတက္ကသိုလ်၊ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံ တင်သွင်းရမည့် နေ့ရက်ပြောင်းလဲကြေညာခြင်း (၁၀-၄-၂၀၁၅) ရက်နေ့မှ (၁၄-၄-၂၀၁၅) ရက်နေ့ အထိ မြန်မာ့အလင်းသတင... Read more
မွေးမြူရေးဆိုင်ရာဆေးတက္ကသိုလ်၏ (၃၁) ကြိမ်မြောက် ဘွဲ့နှင်းသဘင်အခမ်းအနားကို (၃၁-၁၂-၂၀၁၇) ရက်နေ့တွင် မွေးမြူရေးဆိုင်ရာဆေးတက္ကသိုလ်၏ ရွှေရတုခန်းမ၌ ကျင်းပရ... Read more
(၁၂)ကြိမ်မြောက် ကမ္ဘာ့ခွေးရူးရောဂါ ကာကွယ်တိုက်ဖျက်ရေးနေ့ (World Rabies Day) အထိမ်း အမှတ်အဖြစ် မွေးမြူရေးဆိုင်ရာဆေးတက္ကသိုလ်၊ တိရစ္ဆာန်ကုဆေးရုံတွင် (၂၈... Read more
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၏ လမ်းညွှန်မှာကြားချက်များ နှင့်အညီ မွေးမြူရေးဆိုင်ရာဆေးတက္ကသိုလ် ပရိဝုဏ်အတွင်း... Read more
မွေးမြူရေးဆိုင်ရာဆေးတက္ကသိုလ် ရေဆင်း၊ နေပြည်တော် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း ၁။ နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ၊ ရေဆင်း၊ မွေးမြူရေးဆိုင်ရာဆေးတက္ကသိုလ် အတွက... Read more
ေမြးျမဴေရးဆိုင္ရာေဆးတကၠသိုလ္ ၏ (၂၉) ၾကိမ္ ေျမာက္ ၀ါ ဆို သကၤန္း ဆက္ကပ္ လွဴဒါန္းပြဲကို တကၠသိုလ္ ေရႊရတု ခန္းမ တြင္ျပဳ လုပ္ခဲ့သည္။ ဆရာေတာ္သံဃာေတာ္မ်ား ဆြမ... Read more
ေမြးျမဴေရးဆိုင္ရာေဆးတကၠသိုလ္၏ (၃၁) ႀကိမ္ေျမာက္ ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္အခမ္းအနားသို႕ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရး ႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက... Read more
ပထမနှစ် သင်တန်းကို (၂၆-၁၁-၂၀၁၈) ရက် တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်ပါမည် (၂၄-၁၁-၂၀၁၈) ရက်မှ (၇-၁၂-၂၀၁၈) ရက်အထိ ကျောင်းအပ် လက်ခံပါမည် တိရစ္ဆာန်ဆေးပညာသင်တန်း (DVM) အ... Read more
၁။ နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ၊ ရေဆင်း၊ မွေးမြူရေးဆိုင်ရာဆေးတက္ကသိုလ်၌ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် အောက်ပါ အဆောက်အဦများ အကြီးစား ပြုပြင်မွမ်းမံရန် မြ... Read more
Nwe et al. 2020 A cross-sectional study on porcine cysticercosis in slaughtered pigs from Mandalay City Read more
နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ၊ ရေဆင်း၊ မွေးမြူရေးဆိုင်ရာဆေးတက္ကသိုလ်၌ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် အသုံးပြုမည့် အောက်ဖော်ပြပါ ဓါတ်ခွဲခန်းသုံး စက်ပစ္စည်းများကိ... Read more
၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘဏ္ဍာရေးခွင့်ပြုငွေဖြင့် သဇင်ငြိမ်းကုမ္ပဏီမှ တာဝန်ယူဆောက်လုပ်သော (၁၈၀́ x ၄၉́ x ၂၄́) RC နှစ်ထပ် e-Library အဆောက်အဦ နှင့် ရဲတံခွန်ကုမ္ပဏီမှ တာ... Read more
နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ၊ ရေဆင်း၊ မွေးမြူရေးဆိုင်ရာဆေးတက္ကသိုလ်၌ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် အသစ်ဆောက်လုပ်မည့် အောက်ပါအဆောက်အဦများ ဆောက်လုပ်ရန် မြန်မာနိ... Read more
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး နှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ မွေးမြူရေးဆိုင်ရာဆေးတက္ကသိုလ် (ရေဆင်း၊ နေပြည်တော်) တွင် ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ်အတွက် အောက်ဖော်ပြပါ... Read more
Myanmar Journal of Veterinary and Animal Sciences (MJVAS)
၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ် ဘွဲ့လွန်သင်တန်းဝင်ခွင့် လူတွေ့နှုတ်ဖြေ စာမေးပွဲ ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများ စာရင်း အသိပေးကြေညာခြင်း
၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ် ဘွဲ့လွန်သင်တန်းဝင်ခွင့် အရည်အချင်းစစ် ရေးဖြေစာမေးပွဲ ဖြေဆိုအောင်မြင်ပြီး လူတွေ့နှုတ်ဖြေ စာမေးပွဲ ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများ စာရင်း အသိ... Read more
Download မှတ်ချက်။ ။စာမေးပွဲ ဖြေဆိုမည့်သူများသည် (၂၉.၆.၂၀၂၁) ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား၍ ဝန်ထမ်းရေးရာဌာန (ဖုန်းနံပါတ် ၀၆၇-၃၄၁၆၆၅၇) သို့လည်းကောင်း၊ inf... Read more
မွေးမြူရေးဆိုင်ရာဆေးတက္ကသိုလ် ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ပညာသင်နှစ် မြတ်ဆရာပူဇော်ပွဲ အခမ်းအနားကို ၂၂-၈-၂၀၁၄ ရက်နေ့တွင် မွေးမြူရေးဆိုင်ရာဆေးတက္ကသိုလ် ရွှေရတုခန်းမတွင် က... Read more
မွေးမြူရေးဆိုင်ရာဆေးတက္ကသိုလ်တွင် သင်ကြားပို့ချလျက်ရှိသော (၂၀၁၉-၂၀၂၀) ပညာသင်နှစ်အတွက် အောက်ဖော်ပြပါဘွဲ့ကြိုသင်တန်းအသီးသီးကို (၃-၂-၂၀၂၂) ရက် နေ့ တွင်စ... Read more
မွေးမြူရေးဆိုင်ရာဆေးတက္ကသိုလ်၏ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ် ဘွဲ့လွန်သင်တန်းသား၊ သင်တန်းသူများ၏ Public defence ကို (၁၇-၆-၂၀၁၈) ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်... Read more
မွေးမြူရေးဆိုင်ရာဆေးတက္ကသိုလ်နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မည့် Increasing the quality, safety and capacity of food production for small-scale livestock far... Read more
မွေးမြူရေးဆိုင်ရာဆေးတက္ကသိုလ် ၂၀၁၃ -၂၀၁၄ ပညာသင်နှစ် အတန်းတင်စာမေးပွဲ အောင်မြင်သူများစာရင်းကို ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်သည်။ ပထမနှစ်အောင်စာရင်း Download ပြုလု... Read more
မွေးမြူရေးဆိုင်ရာဆေးတက္ကသိုလ်၊၂၀၁၄-၂၀၁၅ ပညာသင်နှစ် တိရစ္ဆာန်ဆေးပညာသင် တန်းနှင့် မွေးမြူရေးပညာသင်တန်း ပထမနှစ်သင်တန်း တက်ရောက်ခွင့်ရရှိသူများစာရင်း ထုတ်... Read more
နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ၊ ရေဆင်း၊ မွေးမြူရေးဆိုင်ရာဆေးတက္ကသိုလ်၌ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ကျောင်းသားအိပ်ဆောင်များ အကြီးစားပြုပြင်မွမ်းမံရန် မြန်မာနိ... Read more
​မွေးမြူ​ရေးဆိုင်​ရာ​ဆေးတက္ကသိုလ်​ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်​နှစ်​ ​ဆေးခန်​းဆိုင်​ရာပညာရပ်​များအသင်​း နွားထိုးကြီးမြို့နယ်​သို့ ကွင်​းဆင်​း​လေ့လာ​ရေးခရီးစဉ်​
၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်​နှစ်​ ​ဆေးခန်​းဆိုင်​ရာ ပညာရပ်​များအသင်​း၏ ပဉ္စမနှစ်​ BVSc ​ကျောင်​းသား၊ ​ကျောင်​းသူ (၂၆၄) ဦးတို့သည်​ ကြီးကြပ်သူ ဆရာ ဆရာမ (၂၄)ဦး လိုက... Read more
၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်​နှစ်​ မွေးမြူရေးဆိုင်ရာဆေးတက္ကသိုလ် အဖွဲ့သည် ​ဆေးခန်​းဆိုင်​ရာ ပညာရပ်​များအသင်​း၏ ပဉ္စမနှစ်​ BVSc ​ကျောင်​းသား၊ ​ကျောင်​းသူ (၂၆၄) ဦးတ... Read more
စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန ၏ ၂၀၁၉ ခုနှစ် မိုးရာသီသစ်ပင်စိုက်ပွဲကို ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက် နံနက် ၇ နာရီခွဲအချိန်က နေပြည်တော် ဇေယျာသီရိမ... Read more
မွေးမြူရေး၊ ရေလုပ်ငန်းနှင့် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန မွေးမြူရေးဆိုင်ရာဆေးတက္ကသိုလ် ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းများအတွက် အ... Read more
မွေးမြူရေးဆိုင်ရာဆေးတက္ကသိုလ်မှ တိရစ္ဆာန်ဆေးသိပ္ပံဘွဲ့၊ မွေးမြူရေးပညာဘွဲ့ ရရှိပြီးသူ အမျိုးသားများအား တပ်မတော်(ကြည်း) ဗိုလ်သင်တန်းကျောင်း(ဗထူး)၊ ဗိုလ်... Read more
ယေန႔ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၅ ရက္ ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ ေမြးျမဴေရးဆိုင္ရာေဆးတကၠသိုလ္ ငါးေမြးျမဴေရးႏွင့္ ငါးေရာဂါေဗဒဌာနမွဆရာဆရာမမ်ား ျကီး မွဴး၍ ေမြးျမဴေရးပည... Read more
၂၀၁၆ နိုဝင်ဘာလ ၂၈ ရက်နေ့တွင် FAO Dry Zone Project မှ Dr. Murray Maclean သည် မွေးမြူရေးဆိုင်ရာဆေးတက္ကသိုလ်မှ ပညာရပ်ဆိုင်ရာ ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် လာရောက်တွ... Read more
၂၀၁၉၊ ဩဂုတ်လ/စက်တင်ဘာလအတွင်း ကျင်းပခဲ့သည့် ပထမနှစ် (DVM)၊ ပထမနှစ် (BASc)၊ ဒုတိယနှစ် (DVM)၊ ဒုတိယနှစ် (BASc)၊ တတိယနှစ် (DVM)၊ တတိယနှစ် (BASc)၊ စတုတ္ထနှ... Read more
​မွေးမြူ​ရေးဆိုင်​ရာ​ဆေးတက္ကသိုလ်​၊ ​မွေးမြူ​ရေးပညာသင်​တန်​း၊ တတိယနှစ်​နှင်​့ ​နောက်​ဆုံးနှစ်​ ​ကျောင်​းသား/​ကျောင်​းသူများအား (၁၄.၆.၂၀၁၈)​ရက်​နေ့ နံန... Read more
၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္၊ တိရစာၦန္ မဟာေဆးသိပၸံဘြဲ႕ အဆိုျပဳစာတမ္းဖတ္ပြဲ
ေမြးျမဴေရးဆိုင္ရာေဆးတကၠသိုလ္၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္၊ တိရစာၦန္ မဟာေဆးသိပၸံဘြဲ႕ အဆိုျပဳစာတမ္းဖတ္ပြဲ အခမ္းအနားကို (၂၉.၃.၂၀၁၈) ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည... Read more
Htoo et al. 2020_Seasonal occurrence of helminths in freshwater fish collected from local marketswithin Nay Pyi Taw area Read more
နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ၊ ရေဆင်း၊ မွေးမြူရေးဆိုင်ရာ ဆေးတက္ကသိုလ်၊ ၂၀၁၇ -၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် ဓါတ်ခွဲခန်းသုံးပစ္စည်းများကို မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူမ... Read more
DVM (၆) နှစ်သင်တန်းအတွက် စုစုပေါင်းရမှတ် (၄၃၀)မှတ်နှင့်အထက် ရရှိသူများ လျှောက်ထားခွင့်ရှိပြီး အမျိုးသားဦးရေ (၅၀)၊ အမျိုးသမီးဦးရေ (၅၀) လက်ခံပါမည်။ BASc... Read more
Swe et al. 2020_Effect of varying protein level and different physical forms of diet on the performance of weaned pigs Read more
Professor Dr. Aung Aung, Head of the Department of Physiology and Biochemistry receivedadelegation of professors from University of Queensland, Aust... Read more
​မွေးမြူ​ရေးဆိုင်​ရာ​ဆေးတက္ကသိုလ်​၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ်၊ အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး တံခွန်စိုက် ကြက်တောင်ရိုက်ပြိုင်ပွဲ ပိတ်ပွဲနှင့် ဆုပေးပွဲ အခမ်းအနားကို... Read more
Win et al. 2020_Occurrence of caprine Cryptosporidium infection and its associated factors in goats from Pyinmana Township Read more
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန မွေးမြူရေးဆိုင်ရာဆေးတက္ကသိုလ် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများအတွက် အိတ်ဖွင့်တ... Read more
Tinder Advertisement 2020 Download Specification for Lab Equipment 2020-2021 Download Tender Rule & Regulations 2020-2021 Download Tender Applicat... Read more
With the implementation of ACIAR, Department of Physiology and Biochemistry, University of Veterinary Science hosted project planning meeting on 5-6 D... Read more
မွေးမြူရေးဆိုင်ရာဆေးတက္ကသိုလ် ၏ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ် ဘွဲ့လွန်သင်တန်းတက်ရောက်ခွင့်ရရှိသူများ စာရင်း ထုတ်ပြန်ကြေငြာခြင်း
Form of Tender 2020-2021 Download Tender Rule 2020-2021 Download Read more
ပါရဂူ/မဟာသိပ္ပံ သုတေသန အဆိုပြုစာတမ်းဖတ်ပွဲ မွေးမြူရေးဆိုင်ရာဆေးတက္ကသိုလ်၊ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ် ပါရဂူဘွဲ့နှင့် မဟာသိပ္ပံ ဘွဲ့လွန် သင်တန်း ကျောင်းသား၊ကျ... Read more
၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ အတန်းတင်စာမေးပွဲ အချိန်စာရင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ်၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇူလိုင်/ ဩဂုတ်လအတွင်း ကျင်းပမည့် နောက်ဆုံးနှစ် DVM/BAS... Read more
ေမြးျမဴေရးဆိုင္ရာေဆးတကၠသိုလ္၊ ၂၀၁၇ -၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္ေမြးျမဴေရးပညာအထူးျပဳ(BASc)သင္တန္း ေနာက္ဆံုးႏွစ္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား အား ဂုဏ္ျပဳႏႈတ္ ဆက္ပြဲအခမ္း... Read more
တိရစ္ဆာန်များ အရေးပေါ် ကယ်ဆယ်မှုသင်တန်း (VERU) ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားကို (၁၃-၇-၂၀၁၉) ရက်နေ့ နံနက်(၈:၀၀)နာရီတွင် မွေးမြူရေးဆိုင်ရာဆေးတက္ကသိုလ်၊ စာသင်ခန်းမ(... Read more
မွေးမြူရေးဆိုင်ရာဆေးတက္ကသိုလ်၊ ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူ (၂၀ဝ) ဆံ့ နှစ်ထပ်အိပ်ဆောင် (၃) လုံးအိတ်ဖွင့်တင်ဒါ ဖွင့်ဖောက်ခြင်းအခမ်းအနားမွေးမြူရေး၊ရေလုပ်ငန်းနှင... Read more
၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္ ေမြးျမဴေရးဆိုင္ရာေဆးတကၠသိုလ္ ေနာက္ဆံုးႏွစ္ တိရစၧာန္ေဆးပညာဘြဲ႕သင္တန္း( BVSc) ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအားဂုဏ္ျပဳႏႈတ္ဆက္ပြဲအခန္းအနားက... Read more
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ မွေးမြူရေးဆိုင်ရာဆေးတက္ကသိုလ်တွင် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲအောင်မြင်ပြီး တက်ရောက်ခွင့်... Read more
Author guidelines Read more
မွေးမြူရေးဆိုင်ရာဆေးတက္ကသိုလ် ၂၀၁၇- ၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ်BVSc၊ BASc ၊DVM ကျောင်းသားကျောင်းသူများ၏ မြတ်ဆရာပူဇော်ပွဲ အခမ်းအနားကိုယနေ့ညနေ ၇းဝ၀ နာရီမှစတင... Read more
​မွေးမြူ​ရေးဆိုင်​ရာ​ဆေးတက္ကသိုလ်​၏ မိုးရာသီ စု​ပေါင်​းသစ်​ပင်​စိုက်​ပွဲကို ယ​နေ့နံနက်​ ၇း၃၀ နာရီအချိန်​တွင်​ ​မွေးမြူ​ရေးဆိုင်​ရာ​ဆေးတက္ကသိုလ်​ဝန်​းအ... Read more
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန မွေးမြူရေးဆိုင်ရာဆေးတက္ကသိုလ် (ရေဆင်း၊နေပြည်တော်) ၂၀၁၆ -၂၀၁၇ ပညာသင်နှစ် ဘွဲလွန်သင်တန်းသားများခေါ်ယ... Read more
ေမြးျမဴေရးဆိုင္ရာေဆးတကၠသိုလ္ ၂၀၁၇- ၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္ BVSc ေနာက္ဆံုးႏွစ္ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၏ ဘြဲ႕ယူသုေတသနစာတမ္း ( Graduation Thesis )ဖတ္ပြဲအခမ္းအနားပ... Read more